Tronsmart Ewebata Apollo Bold, Isi Ikuku na Ikuku Ọrụ Noise Kagbuo | Akụkọ akụrụngwa
Na 2016, Apple kwalitere iPhone mbụ na - enweghị igwe isi okwu, mmegharị nke ndị nrụpụta ndị ọzọ soro obere obere ma ọ fọrọ nke nta taa ọ siri ike ịchọta ama nwere ụdị njikọ a. Mbugharị a amanye ndị ọrụ gaa na ekweisi ikuku.
Agbanyeghị na Apple abụghị ụlọ ọrụ izizi weputara ekweisi ikuku, Samsung na Bragi enyelarịrị ụdị ngwaahịa ndị a, ọ bụghị ruo mgbe mwepụta nke AirPods na 2016 (otu afọ ahụ ọ kpochapụrụ jack headphone) na wireless ekweisi ghọrọ a na-emekarị.
Ka ọtụtụ afọ gafere, mkpa ndị ọrụ anaghị agabiga ekweisi ikuku na-enweghị nnwere onwe dị mma, kama na-enyekwa uru dị ukwuu ha nwere ike ịnye. N'echiche a, Nkagbu mkpọtụ bụ otu ihe dị mkpa maka 36% nke ndị ọrụ na-achọ ụdị ekweisi a.
Emeputa Tronsmart ka ọkọnọ ihe Apollo Bold, ụfọdụ ngwakọ arụ ọrụ mkpọtụ kagbuo ekweisi na mmekota, ọzọ, na processor emeputa Qualcomm. Igwe okwu ekwe ekwe Tronsmart ohuru na-eji QCC5124 processor, ihe nhazi nke ahụbeghị na ngwaọrụ ọ bụla na ahịa.
Tronsmart Apollo Bold, dakọtara na ịkagbu mkpọtụ na arụmọrụ Bluetooth, na-enye ohere ka ọrụ abụọ na-enye arụmọrụ kacha mma. na-arụ ọrụ ma ọnụ. Imirikiti ekweisi ikuku dị ugbu a na ahịa na-eji otu mgbawa maka njikọ Bluetooth na onye ọzọ maka ịkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ.
Ezubere ekweisi ọhụrụ Tronsmart a na teknụzụ ngwakọ a na-enyekwa ohere kagbuo mkpọtụ n'ọtụtụ dịgasị iche, iji nweta nsonaazụ ka mma, na-enye ohere iji nweta nkagbu mkpọtụ nke ruru 35 dB, maka kachasị 28 dB nke a na-enye site na ọtụtụ ekweisi ikuku na ahịa.
Ihe ohuru ohuru nke anyi huru na igwe ohuru ohuru a bu ojiji nke teknụzụ mbufe ozi. Nke a na-enye ohere zipu akara ngosi Bluetooth n'otu oge na nti ntị aka ekpe na aka nri. Ọtụtụ ekweisi ikuku na ahịa, otu n'ime ha bụ onye na-anata mgbaama wee nyefee ya na ekweisi nke ọzọ, nke nwere ike ibute ụfọdụ oge ịmekọrịta.
1 Tronsmart Apollo Nkwuwa Okwu
2 Soro na eserese ahụ maka ụfọdụ Apollo Bold
Tronsmart Apollo Nkwuwa Okwu
AptX dakọtara -enye magburu onwe ụda àgwà.
Ọ nwere Igwe okwu 6 nke na-enye ezigbo ogo dị mma yana nke ahụ na-enyekwa ohere ịkagbu mkpọtụ mkpọtụ iji nye nsonaazụ ọma dị otu a.
Ọ nwere ụzọ atọ: ANC (nkagbu mkpọtụ), Egwu na nghọta (na-ebelata ụda ihere na-enweghị ikewapụ onwe anyị kpamkpam na gburugburu ebe obibi).
Obodo kwụụrụ nke awa iri na anọ nke egwu egwu na-ekele maka ikpe ikpe.
Ibu ọ bụla na-enye anyị ohere jiri ekweisi maka awa 10.
Ọ nwere ọrụ na na-achọpụta mgbe anyị tinyere ekweisi na ntị ịkwụsịtụ ma ọ bụ ịmalitegharịa egwu egwu.
Na Septemba ịmalite ngwa maka ekwentị mkpanaaka Ọ ga - enyere anyị aka ịhazigharị igwe okwu.
Soro na eserese ahụ maka ụfọdụ Apollo Bold
Asọmpi kachasị nke Apollo Bold bụ AirPods Pro, mana ndị a bụ 46% dị ọnụ ala, yabụ ọ bụrụ na mmefu ego echeghị ịkwụ ụgwọ karịa 25o euro nke isi ekweisi Apple, ị kwesịrị ịtụle nhọrọ a.
Iji mee ememme mmalite nke Apollo Bold, Tronsmart akwadebewo onyinye, raffle nke ga-arụ ọrụ n'etiti July 15 na 31 na nke anyị ga - eji merie otu ụzọ abụọ Apollo Bold raffles.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Tronsmart na - ewetara Apollo Bold, ekweisi ikuku na kagbuo mkpọtụ na - arụ ọrụ